Iyo App Store inoshandura zvachose dhizaini yayo muIOS 11, ndiwo maratidziro ayo | IPhone nhau
Iyo App Store inoshandura zvachose dhizaini yayo muIOS 11, ndiwo maratidziro ayo
IOS App Store hapana mubvunzo chitoro chakakurumbira uye chinoshanda chemafoni, chitoro chekushandisa chekambani yeCupertino inoita kuchengetedzeka kwakasimba uye kudzora kwemhando yezvinhu, zvichidaro zvichiunza kugutsikana kwakanyanya pakati pevashandisi, izvo zvinoshandurwa kuva chitoro chekushandisa icho inogadzira mari zhinji kune vanogadzira. Nekudaro, haina kumbononoka kunatsiridza, ndosaka Apple yafunga kupa shanduko yakakosha yesikuru kune izvo zvainoratidza, aya ndiwo marongero akaitwa iOS App Store kubva kumusoro kusvika kutsoka, ichiratidza dhizaini yakanaka uye isina kureruka mushandisi.
Apple inochengetedza iyo yazvino dhizaini yeApp Store yakanyanya kureba, ichokwadi kuti yakareruka uye inobatsira nhasi, asi iyo yekukwirisa nguva uye yayo yekutsvaga injini haibatsire zvakanyanya. Zvino na iyo nyowani mushandisi interface, iyo App Store ichatipa izvo zvemukati zvakatsaurirwa isu chete, pamwe nekuratidzira muhukuru hukuru iwo anonyanya kukosha ruzivo kwatiri. Zvese izvi zviripo mune nyowani tebhu «Nhasi».
Saizvozvowo, Apple yaisanganisira maGIF muApp Store, kutibvumira kuti tione nekungotarisa izvo zvinokwanisa kuita mukushandisa chaiko.
Iko pasi kwakunda a nyowani tebhu yakatsaurirwa chete kumitambo yemavhidhiyo, pamwe nepakati isu tichava nemaapplication tab. Pakupedzisira, ivo vanotanga kusiyanisa pakati pe purofiti uye varaidzo. Zvichakadaro injini yekutsvaga inopurukira kurudyi rezasi, ichiperekedzwa neyakagadziridzwa. Apple inoramba ichibhejera pamakona uye dhizaini dhizaini mune ayo mashandisiro, uye isu tinozvida izvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Iyo App Store inoshandura zvachose dhizaini yayo muIOS 11, ndiwo maratidziro ayo